Angry Birds dia efa mampifandray ny lalao ao anaty rahona | Vaovao IPhone
Ny isan'ny fotoana tsy maintsy nanomboka nilalao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny Angry Birds, Tsy afaka manome isa eo ho eo aho. Hiova izany satria manomboka izao dia manome safidy i Rovio hamorona kaonty mitahiry ny angon-drakitra ka afaka manao izany atombohy amin'ny fitaovana iray ny lalao ataontsika ary tanteraho amin'ny iray hafa, raha mbola samy manana kaonty miasa avokoa.
Efa ela i Apple no nanolotra ny mpamorona ny fahaizana hamerina ny angon-drakitra fampiharana azy ireo amin'ny iCloud. Ity fiasa ity dia ampiasain'ny sasany handrindrana ireo lalao eo anelanelan'ny fitaovana na hanarenana ny fandrosoana vita amin'ny alàlan'ny fametrahana indray ny rindranasa ao amin'ny fitaovantsika. Izany dia manakana antsika tsy hanomboka ny lalao miverimberina rehefa manova fitaovana na mamerina azy ireo nefa tsy mampiasa ny safidy nomaniny ho solon'izay. Mampalahelo fa vitsy ny mpamorona manolotra an'ity endri-javatra ity, na eo aza ny fisian'ny serivisy iCloud nandritra ny roa taona lasa izay. Raha ny tokony ho izy dia toa ny mitobaka no izy ny mpamorona tsirairay dia mamorona ny rafitra fampifanarahana azy ireo eo amin'ny rahona, mamorona kaontinao manokana.
Na izany aza, dia mbola vaovao mahafaly ihany ny ahafahantsika mamonjy ny fivoarantsika amin'ny Angry Birds. Mba hamoronana ny kaontinao na hampiasaina iray efa noforonina dia tsy maintsy tsindrio ny bokotra voamarika amin'ny zana-tsipika amin'ilay sary etsy ambony. Ampifandraiso ny kaonty sy ny kaonty mailaka dia hanana ny kaontinao ianao. Amin'izao fotoana izao Rovio dia manolotra an'ity serivisy ity amin'ny lalao Angry Birds tany am-boalohany (iPhone sy iPad) ary ao amin'ny The Croods, fa kosa rehefa nanambara tao amin'ny bilaogin'izy ireo ny Finn, dia hanitatra tsikelikely an'io asa io amin'ny sisa amin'ny lalao marika izy ireo. Ho fanampin'izany, serivisy serivisy ity serivisy ity, tombony iray izay mampiavaka an'i Rovio fa tsy mampiasa iCloud, ka raha mampiasa fitaovana iOS sy Android ianao dia afaka manohy ny lalao tsy fantatra mazava amin'ny iray na hafa.
Fanazavana fanampiny - Angry Birds Go, ilay vaovao avy any Rovio (Ho avy tsy ho ela)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Angry Birds dia efa mandrindra ny lalao ao anaty rahona
Azonao atao izao ny mividy iPhone mifandray amin'i Yoigo ao amin'ny Apple Store